စိတ်ဓာတ်ကျခြင်း - ဝီကီပီးဒီးယား
စိတ်ကျရောဂါ ( Lat. Deprimo မှ "ဖိနှိပ်ရန်၊ နှိမ့်ချရန်") - စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာချို့ယွင်းခြင်း၏အဓိကလက္ခဏာများ - စိတ်ဓာတ်ကျခြင်း၊ စိတ်ဓာတ်ကျခြင်း၊ နွမ်းနယ်ခြင်း၊ စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်း၊ ကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်ခြင်း သို့မဟုတ် လျစ်လျူရှုခြင်း - စိတ်ဓာတ်ကျဆင်းခြင်း သို့မဟုတ် ဆုံးရှုံးမှု၊ ပျော်မွေ့ခြင်း (anhedonia)။ အောက်ပါလက္ခဏာအချို့သည်များသောအားဖြင့်လည်းရှိနေတတ်သည်၊ မိမိကိုယ်ကိုလေးစားမှုနိမ့်ခြင်း၊ အပြစ်တင်လိုစိတ်မရှိခြင်း၊ အဆိုးမြင်ခြင်း၊ အာရုံစူးစိုက်မှုအားနည်းခြင်း၊ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်းသို့မဟုတ်အားအင်မရှိခြင်း၊ အိပ်ရေးမ ၀ ခြင်းနှင့်အစာစားချင်စိတ်မူမမှန်ခြင်းနှင့်သတ်သေလိုသောစိတ်များ ပြင်းထန်သော စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းပုံစံများကို "depressive triad" ဟုခေါ်သည်- စိတ်ဓာတ်ကျဆင်းခြင်း၊ ဉာဏ်ရည်နောက်ကျခြင်းနှင့် မော်တာနောက်ကျခြင်း တို့ဖြစ်သည်။
အချို့ကိစ္စများတွင် စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းသည် ချစ်ရသူဆုံးရှုံးခြင်းကဲ့သို့သော ဘဝဖြစ်ရပ်များအတွက် ပုံမှန် ယာယီတုံ့ပြန်မှုတစ်ခု ဖြစ်နိုင်သည်။ စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းသည် အချို့သောဆေးဘက်ဆိုင်ရာအခြေအနေများ၏ လက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်ပြီး အချို့သောဆေးဝါးများနှင့် ကုသမှုများ၏ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတစ်ခု ဖြစ်နိုင်သည်။ စိတ်ကျရောဂါဖြစ်ရခြင်းအကြောင်းအရင်းသည်သိသာထင်ရှားမှုမရှိပါ၊ ပြင်ပလွှမ်းမိုးမှုမရှိဘဲစိတ်ကျရောဂါဖြစ်ပွားလျှင်၎င်းကိုစိတ်ကျရောဂါကို endogenous ဟုခေါ်သည်။ စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းနှင့်အတူ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် လေးစားမှု လျော့နည်းလာကာ ဘဝနှင့် ပုံမှန်လုပ်ဆောင်မှုများတွင် စိတ်ပါဝင်စားမှု ဆုံးရှုံးသွားသည်။ အချို့ကိစ္စများတွင်၊ ၎င်းကိုခံစားနေရသူသည် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ တက်ကြွစေသောအရာများကို စတင်အလွဲသုံးစားပြုလာနိုင်သည်။
၂ အကြောင်းရင်းများ နှင့် စိတ်ကျရောဂါ၏ အကြောင်းအရင်းများ
၃.၂ လူကြိုက်များသော ပညာရပ်
လူများစွာသည်စိတ်ကျရောဂါသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ခေတ်၌ဤမျှကြီးကျယ်ခမ်းနားသောလူမှုအရေးပါမှုကိုပြန့်နှံ့သွားပြီး၎င်းကိုယခင်ကမသိခဲ့ပါ။ ဒါပေမယ့်ဒါကအဲလိုမဟုတ်ဘူး။ စိတ်ဓာတ်ကျတာကိုရှေးကတည်းကသိတာ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ယနေ့စိတ်ကျရောဂါ၏အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်နှင့်အလွန်ဆင်တူသောနာမည်ကျော်ဂရိဆေးပညာရှင် Hippocrates တောင်နာမည်ကိုအသေးစိတ်ဖော်ပြခဲ့ပြီးရှေးခေတ်ဆေးစွမ်းပကား၏ဘောင်အတွင်းမှကုသမှုကိုအကြံပြုခဲ့သည်။
အကြောင်းရင်းများ နှင့် စိတ်ကျရောဂါ၏ အကြောင်းအရင်းများ[ပြင်ဆင်ရန်]
စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းသည် ချစ်ရသူဆုံးရှုံးခြင်း၊ အလုပ်အကိုင်၊ လူမှုရေးအဆင့်အတန်းများကဲ့သို့သော ကြီးမားသောအတွေ့အကြုံများ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည်။ ဤသို့သောအခြေအနေများတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် reactive (psychogenic) စိတ်ကျရောဂါအကြောင်းပြောနေကြသည်။ ၎င်းသည်ပြင်ပအဖြစ်အပျက်၊ အခြေအနေအချို့ကိုတုံ့ပြန်မှုအဖြစ်ဖွံ့ဖြိုးသည်။ အချို့သောသီအိုရီများအရစိတ်ဖိစီးမှုကြောင့် ဦး နှောက်ကိုအလုပ်များစေသောအခါစိတ်ဖိစီးမှုသည်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလူမှုရေးအချက်များနှစ်ခုလုံးကိုအခြေခံသည်။
ခက်ခဲသောငယ်ရွယ်သောအတွေ့အကြုံများသည်လူကြီးများတွင်စိတ်ကျရောဂါဖြစ်ပေါ်စေသည့်အန္တရာယ်အချက်တစ်ခုလည်းဖြစ်နိုင်သည် ကလေးဘဝတွင် ဖခင် သို့မဟုတ် မိခင်တစ်ဦး ဆုံးရှုံးခြင်းကဲ့သို့သော အကြောင်းရင်းများသည် စိတ်ဓာတ်ကျသောယုံကြည်ချက်များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် စုစည်းမှုတွင် ပါဝင်နိုင်သည်ဟု အကြံပြုထားသည် (M. Kovack, 1976)၊ မိမိ၏သိမ်ငယ်မှု၌ယုံကြည်မှုရှိသောသို့မဟုတ်အလွန်တရာတောင့်တင်းခိုင်မာသောယုံကြည်ချက်ရှိသောမိဘတစ် ဦး ရှိနေခြင်း၊ လူမှုရေး အတွေ့အကြုံ သို့မဟုတ် လူမှုရေးကျွမ်းကျင်မှု မရှိခြင်း၊ ကလေး၏ ရွယ်တူ သို့မဟုတ် ညီအစ်ကို/မများနှင့် ဆက်ဆံခြင်း၏ အပျက်သဘော အတွေ့အကြုံ၊ ကလေးတွင် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ချို့ယွင်းချက်ရှိသည်။
စုံလင်ခြင်းကဲ့သို့သော ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးအချို့သည် စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းကို တွန်းအားပေးနိုင်သည်။
လောလောဆယ်စိတ်ကျရောဂါဖြစ်ရသည့်အကြောင်းရင်းကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရသေးပါ။ ဤရမှတ်အပေါ် သိပ္ပံပညာအသိုက်အဝန်းတွင် ယူဆချက်များစွာ ရှိပြီး ၎င်းတို့အနက်မှ ယုံကြည်စိတ်ချရသော အထောက်အထားများ မရရှိကြသေးပါ။ စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းသည် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာနှင့် မျိုးကွဲကွဲပြားသောရောဂါတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း ထင်ရှားသည်။
နေရောင်မရှိသောရာသီဥတုတွင်ရှိသူများ သို့မဟုတ် မှောင်နေသောအခန်းများတွင်ရှိသူများအတွက်၊ တောက်ပသောအလင်းရောင်မရှိခြင်းကြောင့် စိတ်ကျရောဂါဖြစ်ပွားနိုင်သည်။ ဤအမျိုးအစားကိုရာသီအလိုက်စိတ်ဓာတ်ကျခြင်း (သို့) ရာသီအလိုက်ထိခိုက်စေသောရောဂါဟုခေါ်သည်။ ၎င်းကိုဆောင်း ဦး နှင့်ဆောင်းရာသီတို့တွင်လူနာများတွင်အများဆုံးတွေ့ရလေ့ရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ နေသာသောရာသီဥတုတွင် လမ်းလျှောက်ခြင်း သို့မဟုတ် အလင်းရောင်ကုထုံးဖြင့် ရာသီအလိုက် စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းကို ကုသပါ။ သို့သော် လူပေါင်း ၃၄၂၉၄ ဦးကို နမူနာယူကာ လေ့လာမှုတစ်ခုတွင် စိတ်ကျရောဂါနှင့် ရာသီကြား ဆက်စပ်မှုကို ရှာမတွေ့ခဲ့ပေ။ စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းသည်လူတစ် ဦး နေထိုင်သည့်လတ္တီကျုနှင့်နေရောင်ခြည်ပမာဏတို့နှင့်မသက်ဆိုင်ပါ။ သို့သော် ဤလေ့လာမှုတွင် အရေးကြီးသော အားနည်းချက်များရှိသည် - အထူးသဖြင့် ဤလူ 34,294 ကို တယ်လီဖုန်းဖြင့် စစ်တမ်းကောက်ယူခဲ့ရာ ဖြေဆိုသူများတွင် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ စိတ်ကျရောဂါ ရှိနေခြင်း သို့မဟုတ် မရှိခြင်းတို့ကို ရောဂါရှာဖွေရန် မဖြစ်နိုင်ပေ။
သိပ္ပံပညာရှင်များကစိတ်ကျရောဂါကိုဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်တွင်အမြစ်တွယ်နေသောအတွေးအခေါ်တစ်ခုအဖြစ်ရှုမြင်ကြသည်။ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာစဉ်းစားတွေးခေါ်မှုအရစိတ်ကျရောဂါသည်လူတစ် ဦး ချင်းအားခက်ခဲသောပြဿနာများကိုဖြေရှင်းရန်အာရုံစိုက်ရန်ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ယန္တရားတစ်ခုဖြစ်လာသည်။ စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းမှရှောင်ကြဉ်သောအပြုအမူများ၊ ပထမ ဦး စွာလူများကပြဿနာဖြေရှင်းနည်းကိုနှေးကွေးစွာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာချဉ်းကပ်မှုမှတဆင့်ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေသောနာကျင်ခံစားမှုများကိုသည်းခံရန်သင်ယူသောဖြစ်စဉ်ကိုရှောင်ကွင်းပြီးအပေးအယူလုပ်ခြင်းနှင့်စဉ်းစားခြင်းတို့မှဖြစ်ပေါ်လာသည်။ ဒုတိယအချက်မှာနာကျင်မှုကိုအလျင်အမြန်သက်သာစေသည့်ဖွံ့ဖြိုးမှုဉာဏအားဖြင့်လိုက်လျောညီထွေညံ့ဖျင်းသောရလဒ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ တတိယအနေနှင့်ရှောင်လွှဲရမည့်အမူအကျင့်များကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်နည်းလမ်းများရှိသည့်ထိုလူမှုပတ်ဝန်းကျင်များတွင်ဖြစ်ပေါ်သည်။
Терапия антидепрессантами и другие методы лечения депрессивных расстройств: Доклад Рабочей группы CINP на основе обзора доказательных данных ။ - M., 2008 ။ - ၂၁၆ အတူ။ Архивная копия
Практические рекомендации по ведению пациентов с депрессией / Подготовил С. Костюченко ။ (မရရှိနိုင်သောလင့်ခ်) အခြေခံ: Gelenberg AJ, Freeman MP, Markowitz JC et al "စိတ်ကျရောဂါဝေဒနာရှင်များကို ကုသရန်အတွက် အလေ့အကျင့် လမ်းညွှန်ချက်များ" // American Journal of Psychiatry (2010; Vol. 167, No. 10, P. 2-124)
Beck A., Rush A., Sho B., Emery G. စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းအတွက် သိမြင်မှုကုထုံး ။ - SPb ။: ပေတရု၊ ၂၀၀၃။ - ISBN 5-318-00689-2 ။
Арана Дж., Розенбаум Дж. အခန်း ၃။ စိတ်ကျဆေးများ / / စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာချို့ယွင်းမှုများ၏ဆေးဝါးကုသမှု။ နှုန်း။ အင်္ဂလိပ်ထံမှ - M .: ထုတ်ဝေရေးအိမ် BINOM၊ 2004။ - ၄၁၆ အတူ။ - ISBN 5-9518-0098-6 ။
Быков Ю. В. ကုသမှုခံနိုင်ရည်ရှိသော စိတ်ဓာတ်ကျခြင်း ။ - Stavropol၊ ၂၀၀၉။ - ၇၄ အတူ။
Смулевич А. Б. အထွေထွေဆေးပညာတွင် စိတ်ဓာတ်ကျခြင်း- သမားတော်များအတွက် လမ်းညွှန်ချက် ။ - M .: ဆေးဘက်ဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်အေဂျင်စီ၊ 2007။ - ၂၅၆ အတူ။ - ISBN 5-89481-103-1 ။
Wayne A. M., Voznesenskaya T. G. et al. အာရုံကြောဆိုင်ရာ လေ့ကျင့်မှုတွင် စိတ်ဓာတ်ကျခြင်း။ အမ်၊ ၁၉၉၈ ။
Нуллер Ю. Л. စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းနှင့် စိတ်ဓာတ်ကျခြင်း (မသတ်မှတ်ထားသော) ။ NTSPZ RAMS ကုသမှုရက်စွဲ- ဖေဖော်ဝါရီ ၂၈၊ ၂၀၁၂။ မော်ကွန်းတိုက် ၂၄ မေလ ၂၀၁၂ တစ်နှစ်တာ၏
Тиганов А. С., Snezhnevsky A.V., et al. စိတ်ရောဂါလမ်းညွှန် / အက်ဒ်။ ရုရှားဆေးသိပ္ပံအကယ်ဒမီ A.S. Tiganov မှ ပညာရှင်။ - M .: ဆေးပညာ ၊ ၁၉၉၉။ - T. ၁။ - အတူ။ ၅၅၅-၆၃၆။ - ၇၁၂ အတူ။ - ISBN 5-225-02676-1 ။
Карачевский А.Б. စိတ်ကျရောဂါအတွက် စိတ်ကုထုံး- ဒဏ္ဍာရီ သို့မဟုတ် အမှန်တရား။ // ယူကရိန်းစိတ်ရောဂါအထူးကုအသင်း၏ ထုတ်ပြန်ချက်။ - ၂၀၁၃။ - မရှိ ၃။
Япко М. စိတ်ကျရောဂါ၏ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကုထုံးအတွက် အိပ်မွေ့ချခြင်း။ - စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာယဉ်ကျေးမှုစင်တာ၊ ၂၀၀၂။ - ၂၄၈ အတူ။ - (စိတ်ရောဂါကုထုံးနည်းပညာ)။ - အုပ်ရေ ၁၅၀၀။ - ISBN 5-7856-0270-9 ။
Non-pharmaceutical management of depression in adults: A national clinical guideline ။ - Scottish Intercollegiate Guidelines Network၊ ဇန်နဝါရီ 2010။ - ၃၇ အတူ။ - ISBN 978 1 905813 55 1 ။
Памятка для пациентов с депрессией။ Клиническая психиатрическая больница имени Н. Н. Солодникова။ 2017-12-14 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Компетентные медицинские решения при депрессии။ 2019-05-16 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=စိတ်ဓာတ်ကျခြင်း&oldid=719925" မှ ရယူရန်